News Collection: दूरी बढेकै हो ?
दूरी बढेकै हो ?
अभिनेत्री रेखा थापा र अभिनेता आर्यन सिग्देलबीच पछिल्लो समय असमझदारी बढेको अनुमान गरिँदै गर्दा उक्त अनुमानलाई बल पुग्ने प्रमाणहरु देखापर्दैछन् ।
जस्तो : हिरो आर्यनले यतिबेला आफू अभिनित 'कसले चोर्‍यो मेरो मन'को प्रमोसन नगरि आफूले अभिनय गरेको अर्को चलचित्र 'बन्दी'को ब्यापक प्रचार र प्रमोसन गरिरहेका छन् । आर्यनले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा 'बन्दी'को प्रमोसन गर्दै हेरिदिन आग्रह गरिरहेका छन् ।
स्मरण रहोस् यतिबेला आर्यन र रेखा स्टारर 'कसले चोर्‍यो मेरो मन'र रमेश गुरुङले निर्माण गरेको 'बन्दी' एकसाथ प्रदर्शन भैरहेका छन् । आगामी शुक्रवारदेखि राजधानीमा यी दुई सिनेमाबीच युद्ध नै हुँदैछ । आर्यनले 'बन्दी'को एकपक्षीय प्रमोसन गर्नु दुईबीच पैदा भएको भनिएको दरारको बलियो प्रमाण हो । भलै दुवैजनाले दरारको खबरलाई ठाडै खण्डन गरेपनि उनीहरु निकट स्रोतका अनुसार आन्तरिक कारणले आर्यन र रेखाबीच पछिल्लो समय असमझदारीको ग्राफ उक्लँदो अवस्थामा छ ।
दुवैबीच असमझदारीको अर्को प्रमाण भनेको'कसले चोर्‍यो मेरो मन'को पब्लिसिटीमा आर्यनलाई 'बायस' गर्नुपनि हो । उक्त चलचित्रको पब्लिसिटीमा पूर्णरुपमा रेखा हावी भएकी छिन् ।
कतिपय समाचारलाई पत्याउने हो भने आर्यन रेखाको क्याम्पबाट बाहिरिएका छन् । रेखालाई साइन गराइएको सिनेमामा अर्का हिरो आयुषलाई सिफारिस गर्ने गरेको आरोप रेखामाथि लागिआएको ती समाचारको दाबी छ ।
सेलिव्रेटीहुडको विकास नभैसकेको हाम्रोजस्तो मुलुक र चलचित्रमा सेलिव्रेटीको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउनु नाजायज होला तर कुनैसमय केमेष्ट्री मिलेको रेखा-आर्यन अनस्क्रिन जोडी अलग हुनुसँग दुवैको व्यक्तिगत प्रवृत्ति पनि जिम्मेवार हुनसक्छ ।
स्मरण रहोस् आर्यनले रेखाको होमप्रोडक्सन चलचित्रबाटै रजतपटमा डेब्यु गरेका थिए । अहिले प्रदर्शन भैरहेका दुवै चलचित्रमा आर्यनलाई एक्सन स्टारको अन्दाजमा देख्न सकिन्छ । रेखा र आर्यनबीच भएको भनिएको असमझदारी नयाँ भने होइन; सम्बन्धमा आउने यस्ता थुप्रै दरारबाट नेपाली चलचित्र क्षेत्र परिचित छ । दुवैजना मिलुन हाम्रो अपेक्षा ।